KGB र संभोग | यस अनन्त ब्रह्माण्ड
KGB र संभोग
अप्रिल 7, 2014
पोस्ट शक्ति . कर्म . म्याट्रिक्स . जनसंख्या . Awakening . व्यर्थ . तथ्य
यो चलचित्र पनि देखाइने:
तपाईं शक्ति र तपाईं हुनुहुन्छ …
को जनसंख्या संग सानो देशहरूमा, सामान्यतया, गर्न 20 लाखौं, विशेष स्थिति एक गोप्य सेवा छ. तिनीहरूले कुनै एक थाह सामना किनभने, on हरू जादू, अकल्पनीय, मायावी र सधैं योद्धा औपनिवेशिक आक्रामकता. व्यापक योद्धा औपनिवेशिक आक्रामकता छल र अपराध को विकृत प्रकारका उक्साउँछ. यो छैन तिनीहरूलाई चासो को लागि एक कारण दास, र आय को एक राम्रो स्रोत, जो “blooms र Smells” पनि वैश्विक लोकतन्त्र को समयमा. सबैभन्दा अचम्मको कुरा, कि तरिका को enslavement जनसंख्याको संख्या द्वारा सीमित छैन.
यस्तो देशहरूमा, “विशेष सेवाहरू दुष्ट” एकल विचार संग आसक्त: “planed” देश “maggots”. शक्ति गर्न खलनायक को विशाल बहुमत गर्न belonged, रगत द्वारा सम्बन्धित, “गोप्य दुष्ट” तिनीहरूले एक ठूलो संख्या मा आफ्नो भ्रूण चलाउन प्रयास गर्दै “महिलाहरुको”. यसो गर्न, तिनीहरूले, पनि, घरेलू बलात्कार संगठित, ठूलो समूह काम. योद्धा औपनिवेशिक आक्रामकता मा संग व्यवस्था भंग एकै समयमा “संगठित अपराध”. एक समाज को सपना, जो देश सबै छोराछोरी छन्, आफ्नो महिला बलात्कृत, “दुष्ट दुष्ट” पछाडि मा उपलब्ध निवारक उपाय र मुटुको धड्कनहरू प्रयोग. र बिना हिचकिचाहट अवस्थामा प्रकुपित सक्छ, जो प्रदर्शन गर्ने मा (प्रहरी, आदि. कानून प्रवर्तन अधिकारीहरु) साधारण नागरिकहरु विरुद्ध आउन. आखिर,, सशस्त्र दास आदेश छलफल गर्न अनुमति छैन, र तहसनहस नागरिकहरु अब अपमान सहन गर्न सक्षम.
जबकि नापसंद उच्च चलाउन – तपाईं व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ. आखिर,, महिलाहरुको “सफल biznesyukam लीन”. जो ती हुन्, राज्य टाई को एक जोडी चोरेछ गर्ने. यो रहस्य मा देश खुवाउन छैन, र समृद्ध “व्यापार”. नम्बर robbed र धोखा astronomically बढ्दै, राज्य रूपमा “धनी”. राज्य र कर प्रणालीको लागि मात्र कमजोर-इरादों मूर्ख लागि अवस्थित. मूर्ख गर्दा र “आगोमा बाल्न” वा “अन्धकारमा कांप” – “सिस्टम” जीवन, र “व्यापार” धनी प्राप्त.
सफल व्यवसायी एक फरक प्रकार संग देशहरूमा कानुनी रूपमा परदेशी प्राण degenerated छैन, जो लागू गर्न आवश्यक गतिविधिहरु को पूर्ण चक्र पालना छैन, र व्यवहार को तयार बनाएको ढाँचासँग पुनर्जन्म तिनीहरूले शक्ति र जीवनको विनाश कब्जा गर्न आवश्यक.
साहसी मान्छे, कि, सामान्यतया, संग ruchkayutsya “bravыmy राजा” अघि “राज्यभिषेक”, गतिविधिको सबै उपलब्ध क्षेत्रहरू मा आफ्नो हात सफा. र प्रतियोगिता तिनीहरूले विशेष छ. Villainy यी सर्कलमा मानिन्छ “बाँच्न सक्ने क्षमता”, र सबै भन्दा despicable जीवन गर्न fittest व्यक्तिहरूलाई छन्.
जब तिनीहरू कसैले आवश्यक “बाहिर मिलाउ” तिनीहरूले विवाद व्यवस्था उपयोगी जानकारी, किनभने उनीहरू लाग्छ, कि “एक विवाद जन्मिएको सत्य”. हुनत, केही, भावनात्मक outbursts लागि र यस्तो provocations समयमा अरू कसैको जानकारी चोरी बाहेक, भइरहेको छैन. विवाद तिनीहरूले मात्र गर्न आवश्यक, जानकारी प्राप्त गर्न, जो पहुँच प्रतिबन्धित वा असम्भव छ. प्रविधिलाई अनुसार, एक प्रतिद्वन्द्वीको मा गोफन माटोको, म उपयोगी जानकारी प्रदान गर्न बहाना आवश्यकता, जो सामान्यतः नयाँ हतियार विकास को लागि प्रयोग गरिन्छ.
नालायक संग जोडी, “dregs” सुरक्षा सेवाहरू वा वंशानुगत देखि “dregs” यो मर्यादा को एक चिन्ह छलफल र “godsend”, जो प्रत्येक र धेरै शायद छैन पतन. आखिर, आफ्नो “जादू inaccessibility” मात्र सबैभन्दा योग्य “अविश्वसनीय विस्तार केंद्रित”, जो प्रशस्त मात्रामा प्रदान गर्न सक्छन् “वंशानुगत धरण”. सबैभन्दा अचम्मको कुरा, ती कि, जो राम्रो आकार लो व्यवस्थित, उत्साहित र खुसी यी सबै विरोधाभासी परिस्थिति, यद्यपि, यस को लागि बाँच्न थियो. जेटा जेटा अत्यन्तै खुसी. “उच्च जनावर”, यसको आफ्नै उप भित्र संभोग, अन्य उप चोट लाग्नु गर्न प्रयास. यस मामला मा,, विभिन्न जाल र चाल थाह, rebirth को नियम उल्लङ्घन, शरीर नै राम्रो र sweeter भाग्य snatching, केहि सन्दर्भमा बिना. यस्तो जानकारी भाइरस विषय हुनुपर्छ “विशिष्ट नैदानिक ​​उपचार”, जो वाहक रूपमा संलग्न र संक्रमित गर्नुपर्छ.
“विशेष दुष्ट दुष्ट” ठेस मा राम्रो कुरा प्रकुपित, घृणा गर्न तिनीहरूलाई ल्याउन र कम आवृत्तियहरुमा प्रवेश, उपलब्ध उपकरण को मद्दतले, तिनीहरूलाई आफ्नै पापको र अपराधको लागि दोष मर्ज गर्न. जो पछि तिनीहरूले दावी सक्छ: “तपाईं हामी जस्तै bipedal fikalnoe चयन हुनुहुन्छ!” यसरी, सुरक्षा सेवाहरूमा बसे, सिर्जना “आफ्नै प्रकारको”.
“शीर्ष शैतानी संसारहरू” स्वतन्त्र एउटा अवस्थित देवता invents, कि लाभ मात्र तिनीहरूलाई. र तपाईं परमेश्वर हुनुहुन्छ भने – तपाईं चमत्कार गर्न, Satanists पुस्तकहरू मा वर्णन कि. अन्यथा – poyschut दोस्रो. यो सबै पागल को भीडलाई द्वारा समर्थित “गुंडे”, जो परमेश्वरले आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने आवश्यक, र आफूले गर्न चाहनुहुन्छ भने – यो नक्कली अर्थ.
जवान पुस्ता हाम क्रमबद्घ प्रणालीबद्ध zombotuhoy. प्रेत मात्र पछि बन्द हुनेछ, तपाईंलाई सुरू “सही sputter”. आमाबाबुको आत्म-सन्तुष्टि हुन छोराछोरीलाई खुवाउने र खाना निर्भरता देखि गठन गर्ने, जो बलियो खेल्छ “को खानपान”. वैकल्पिक शक्ति को तरिका मा अनुसन्धान हत्या सम्म रोकियो छन्, र अनुसन्धान परिणाम ज्ञात गोप्य समाजमा बन्न, जो अन्ततः मूर्ख शासन.
मुर्ख अनुभवहीन “मानिसहरू” तिनीहरूले भीड ठाउँहरू भ्रमण गर्न प्रेम, जो मा रूपान्तरित छन् “नृत्य hamsters”. “पुरुषहरु”, सामान्यतया, आफ्नो ल्याउन “महिलाहरुको” सानो खेत गर्न, जहाँ तिनीहरूले अन्य को एजेन्ट रूपमा कार्य गर्ने प्रयास “पुरुषहरु”, जो आक्रमण प्रतिबिम्बित “सुअवसर” सँगैको. जबकि “महिला” मा सर्छ “वातावरण” गुणन गर्न भावनात्मक र वैवाहिक प्रतिज्ञा – “सुअवसर hamsters” प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया देखाएका प्रतिबिम्बित “पुरुषहरु”. Satanism यति razrostaetsya किल्ला. र धेरै “महिलाहरुको” बस गज मा लुकाउन, तिनीहरूले फेला परेन थियो. ब्रह्मांडीय शक्ती को व्यापक खपत बावजुद, “hamsters” अनिवार्य अनुसन्धान गतिविधिहरु परहेज. आफ्नो शरीर को के बेकार छ कारक अनन्त गर्न tends देखि, र शरीर आवश्यक छैन हो. सबै निर्वासनमा सुनाइसकेको यो विशिष्ट मा, जो गर्न अस्वीकार “अनिवार्य पायलट कार्यक्रम”. तैपनि, शायद, आफ्नो व्यवहार तथ्यलाई कारण छ, कि “उच्च जनावर” यस माटोको मा उभडा संग यस प्रकारको जीवनसाथी “उच्च सुँगुरहरु, chervyami, maggots, Cockroaches र vermin”, किनभने जस्तै जस्तै आकर्षित.
घमन्डी शिक्षकहरू, स्वीकृत सुरक्षा सेवाहरू, सट्टा, आफ्नो तत्काल कार्य पूरा गर्न, तिनीहरूले ती वार्ड को सम्भावित बुद्धि नष्ट गर्न रुचि, जो को मा शिक्षा अंक नाघ्यो सम्भावित 100-900 हजार. कारण शिक्षा isporozhnyaetsya यस प्रणालीमा “कालो वर्गहरूको”. blackness को स्तरमा मस्तिष्क dissection असफल निर्धारित छ भने – यस्तो देखि “शरीर” पहिले नै प्रक्रिया को हटाउनु गर्न प्रयास, भविष्यमा ज्योति को उपस्थिति संभावना जोगिन. को “उज्ज्वल मस्तिष्क” nedoprepodavateli आफ्नो सबै समस्याहरूको र समस्या मर्ज गर्ने प्रयास, यसरी माल सामान उतार्नु, आफ्नो जीवन श्रेष्ठता को केहि छिन रहने भावना संग एक सानो सजिलो र भरिएको हुन्छ. पनि, एक शानदार विद्यार्थी शिक्षाको समस्या संग गर्न केही छ भने – यसलाई जसरी पनि “एकअर्काको कर्म पोखे” चेतावनी बिना, अरू कुनै एक यो हटाउन सक्षम छ किनभने. भाग मा, यो क्रममा गरेको छ, pupils गठन गर्ने, जो गम्भीर प्रतियोगिहरु बन्न सक्छ, विज्ञान गर्न अनिच्छा र प्रकृति को नियम. यस्तो अयोग्य शिक्षकहरूले परम expulsion सुनाइसकेको छन्.
यसरी, मा “शैतानी दुनिया” महत्व मात्र शैतानी वित्तीय प्रणाली र सरकारी संस्थानहरुको. महत्वपूर्ण कुरा हो, यसको मोटाई क्षतिपूर्ति धेरै बोसो कसरी आफ्नो वालेटमा र कसरी चाँडै, र प्रेस न कति घन वा औंलाहरुमा-आउट बाइसेप पम्प्ड. कम से कम आफ्नो बौद्धिक क्षमता को मूल्य छ, तर obfuscation लैंगिक प्राथमिक मा संलग्न गर्न propensity. यो एक वयस्क युवा बन्ने इच्छा छ धेरै महत्त्वपूर्ण छ, चाँडै फोहर सबै प्रकारका आफूलाई डुबाउनु गर्न.
सबै भन्दा ठूलो “भर्ना” संभावित बच्चाहरु विशेष सेवाहरू छ. तिनीहरूले लगभग पालने देखि पहिले नै प्रयास गर्दै छन् विशिष्ट समूह गठन “हामी कटौती” आफ्नो साथीहरूको, उपयोगी जानकारी निकाल्दा, यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता संग समाजमा लाभ र विश्वस्त स्थिति उत्पन्न गर्न सक्षम छ जो. सामान्य बच्चाहरु विपरीत, तिनीहरूले, साथै आफ्नो वयस्क आमाबाबुले, कहिल्यै “प्ले” इमानदार. बाल्यकाल गर्न प्रयास “यस माटोको मा तान्नुहोस्” सबै र सबै भन्दा राम्रो र सुन्दर, जो सम्म पुग्न सक्दैन. यो बहिष्कृत छैन, र त्यहाँ पनि एउटा सामान्य मान्छे हुन सक्छ.
यसको आफ्नै अत्यावश्यक कार्यहरु उपयोगी ब्रह्मांडीय ऊर्जा चक्र खपत, “अस्थिर जुम्रा” र “prolupivshiesya लीख s” ऊर्जा क्षेत्र नियन्त्रण स्थापित गर्न खोजिरहेका, आफ्नै को आय को स्रोतहरु रक्षा गर्न. तापनि यस, यो ऊर्जा कि धन्यवाद जीवन चक्र को सबै को कार्यान्वयन छ, यो जीव को प्राकृतिक आवश्यकता मात्र होइन सन्तुष्टि समावेश (दृष्टि, गति, Tantra, संतृप्ति, भावनात्मक कष्टहरू, आदि ..), तर पनि सम्बन्धित गतिविधिहरु आरामदायक जीवन को संभावना पैदा, शक्ती विभिन्न प्रकारका जसको लागि अनंत स्पेस प्रदान (बिजुली, आगो, चुम्बकीय सेना), को अनंत विश्व अस्तित्व र देवत्व, तैपनि, पहिचान. शायद, तथ्यलाई कारण, कि “मोरोन” केवल पहिचान गर्न सक्षम छ, भनी धड्किन्छ “ryahu”. र, आफ्नै स्थिति सफाइ र अनुभवहीन भ्रम प्रविष्ट गर्न, तिनीहरूले अनुकूलन टिभी च्यानलहरू हटाउन र सारा समावेश, लागि accomplices लागि जो देखिन्छ “satanynskomu दोकान”. साँच्चै, योग्य गतिविधि वर्तमान “Fika”. यस ऐनामा आफूलाई हेर्न – यो सत्य झल्काउँछ.
बिग्रेको संरचना Satanists संगठित को चिल्लो कार्यका लागि यो हेर्न, धन र शक्ति राम्रो-नियन्त्रित मूर्ख को हात फसे. को अपघटन प्रक्रिया romanticism आनुवंशिक propensity भरिन्छ “satanynskyh महिलाहरुको” कुनै पनि साथ मेट गर्न “Freak” र सामान्य छैन, जो पुरातन समयका लागि लगाया जान सक्छ (को Azazel देखि, उदाहरणका लागि).
बिग्रेको संरचना गर्न प्रणाली फस्टाए र प्राकृतिक देख्यो, यसको आयोजकहरु र योगदानकर्ता मा लुकेको “असम्भव परिस्थिति देखि सेल”, achievable छैन धन्यवाद के गर्न लागि “सिस्टम दास”.
कारण पहिले वर्णन दोषपूर्ण संरचना विश्व आसपास को जटिल काम गर्न Timeliness जोडतोडले छ, जो uselessness र आशाहीनता वृद्धि गर्छ. कारण क्षति को वैश्विक प्रकृति असामयिक भन्दा झुन्डिएको गर्न, यसको initiators र समर्पित प्रदर्शन गर्ने सुनाइसकेको “विशिष्ट निर्वासनमा”. यो तिनीहरूलाई सामना गर्न छ.
यो विश्वासघात छ, जो अन्धकारमा सिर्जना “खैरो” टुकडे. माटो को अन्धकार सजाउनु छैन.
तपाईं तयार हुनुहुन्छ “zdohnut” बोर्ड, छोराछोरीलाई सधैं दासत्व बस्थे?
~ "* ° ☸ Okean Elzi - Bilshe dlya Nas ☸ ° * "~
तपाईं lurking भने “दुष्ट” – यसलाई अर्थ या त तपाईं यसलाई आफैलाई नष्ट, वा यो तपाईं संग नष्ट हुनेछ, तर, सम्भवतः, यो तपाईं नाश.
आफ्नो खुट्टामा अन्तर्गत पृथ्वी Scorching र “आकाश पहाड मा थूकना” – नयाँ विश्व एउटा राम्रो सुरुवात! ((( )))
• ● ⊡ ☆ Oliver शान्ति – उच्च र उच्च ☆ ⊡ ● •
फेब्रुअरी 2013 को Gregorian पात्रोमा वर्ष.
आगो को लाइन